သက်တင်းစင် show | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သက်တင်းစင် show
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 26, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 10 comments
တော်ဝင်ဆုထူးပန်တာဝါ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနှင့် ဖားသားလတ်ကုမ္မဏီ အပြန်အလှန် ရှင်းလင်းရာ ပြောင်သလင်းခါသွားသဖြင့် နောက်ကျ ရောက်သွားသော စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးမှူး ဖားပြုတ်အောင်ပု လက်ဖက်ရည်ဖိုး မရလိုက်ဂျောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန် အာဏာရူး ကြံ့ဖွတ်ပါတီတွင် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ငှက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၏ ပြောဆိုမှုကို တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျရန် လက်တလုံးအလို နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါ ကယ်တင်ခဲ့သော တပ်မဒေါ်ဂျီးမှ ဝမ်းသာအဲလဲ ကြိုဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာပြည်၌ အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သော လုပ်ငန်းငါးရာစာရင်းတွင် ပြည်ပမှလာရောက် မှတ်ပုံတင်သည့် မန်းလေးဂေဇက် မီဒီယာ သီသီလေး လွဲသွားဂျောင်း အယ်ဒီတာဂျုတ် လျှာပွတ်ခိုမ်မှ မချင့်မရဲ ပြောဆိုသည်။
ပဲမျိုးစုံပို့ကုန် ကျဆင်းခြင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းကုန်ပြီး ပဲမများတော့၍ဖြစ်ကြောင်း ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ရှင်ဂျီးလျှာပွတ်ခိုင်က ပုဂံမြို့ဟောင်း တနေရာမှ ပွဲကျောင်းသိုင်း လေ့ကျင့်ရင်း ဝေဖန်သည်။။
စစ်တွေမြို့အနီး နေရာချထားပေးထားသော ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရန် ငြင်းဆန်သဖြင့် အမေရိကန် လော့စ်အိမ်ဂျလိစ်မြို့ရှိ ၎င်းပိုင် ကိုဘေးနွား မွေးမြူရေးခြံတွင် နေရာချထားပေးရန် ဂေဇက်သဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်မှ ကမ်းလှမ်းသော်လည်း ခရီးစရိတ်နှင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ တာဝန်မယူဟု ကြေငြာသည်။
ပြည်နယ်၊တိုင်း အစိုးရများ အာနာရှိရေး သွားဆရာဝန် မရှိလေ ကောင်းလေဟု ညံဂျီးရှင် ကြံဖွတ်ဂေါင်းဆောင် တဦးမှ သကြားလုံး ပလုပ်ပလောင်းစားလျက် ပါတီဗဟို ညီလာခံတွင် အကြံပြုသည်။
၈လေးလုံး ငွေရတု နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား တက်ရောက်ရန် ၈၈မျိုးဆက်ဂေါင်း တဦးဖြစ်သူ အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ပြည်ဝင်ခွင့်တင်ရာ နာမည်ကြောင့် ဗီဇာမရ ဖြစ်နေ၍ ရခိုင်တောလမ်းဖက် ခိုးဝင်ရန် သမီးဒေါ်ဂလေး ကစားဖက် ရွှေကြောင်မှ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
တပ်ပိုင်မြေ ကျူးကျော်မှုဖြင့် တောင်ငူမြို့ သဲဖြူကျေးရွာသား ၁၁ဦးနှင့် သတင်းထောက်တို့အား သံချပ်ကာတပ် ၇၀၁၃မှ အမှုဖွင့်ထားဂျောင်း တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံသို့ သံထည်များ လာသွင်းစဉ် ဒုတပ်ရင်းမှူး ကျော်မင်းထိုက်မှ ဘေးဘီဝဲယာ ကျီးကန်းတောင်မှောက်ကြည့်လျက် ပေါစိုသည်။
ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အမာခံလူငယ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေရာ သင်္ကြန်တွင်း ခေါင်းလျော်ခံ သက်ကြီးရွယ်အိုစာရင်းတွင် မဟုတ်တရုတ် ဝသဗုံ ကြေးမုံဂျီးအား ရှေ့ဆုံးဦးစားပေး နံပါတ်တစ် ထားရှိသည်။
ဘာသာရေး မကျွမ်းကျင်သဖြင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေအား မဝေဖန်လိုဂျောင်း၊ စီးပွားရေး နားမလည်၍ ဦးပိုင်အရေး ဆွေးနွေးဖို့ မရှိဂျောင်း၊ စစ်သမီးမဟုတ်၍ တပ်မဒေါ်ကိစ္စ မပြောလိုဂျောင်း၊ ဝမ်ပေါင်ကြေးနီ စီမံကိန်းကိုတော့ ဆက်လုပ်သင့်ဂျောင်း တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ယူနန်ပြည်နယ် မြန်ကျင့်ဒေသ အကြီးအကဲ ဘွားဒေါ်ဂျီးမှ ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများအား ဝေဖန်ထားသည့် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ပြည်တွင်း၌ ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကာလသားကြိုက် ပလေးဘွိုင် မဂ္ဂဇင်းကိုမူ ခွင့်ပြုထားမည်ဟု အရေးဗော်ကလား စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဆာဒူးဂျီးကပေမှ ဆိုသည်။
သာမီးလေး ရတနာမိုင်က နောက်ဆုံးထွက်မည့် သီချင်းခွေအား ဟူးအာယု အမည်ပေးထားဂျောင်း ပေါ်ပြူလာ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိပြီးနောက် ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ တေးရေး ဒါရိုက်တာ အာယုမှ အိမ်မက်လာပေးဂျောင်း အနုပညာရှင်များ အတွင်းသတင်း ပေးပို့နေသူ အောက်ခံအဝတ်အစားဆိုင်ပိုင်ရှင် နှူးဘာဂီထံမှ သိရသည်။
ဟီးး ရခိုင်တောလမ်းတော့သိတယ်။ ပြောဝူး။
ကြေး နီ ကို စိတ် နာ လို့ တရုတ် က သတ္တု
ဝါ ယာ သုံးတာ။ မီးအား ကနည်း။ မီးအား မြှင့် စက်က
ဆွဲ နဲ့။ ပူလွန်း ၍ ပျောက် သွားတယ် ဗျာ။
နောက်ဆို ကြေးနီ အကြောင်း ဆို ကျော်ဖတ်မယ်။
ဦးအာယု လည်း ဆုံးပြီ ကိုး … မသိလိုက်ဘူး
ဒါဆို သဘာဝ အုပ်စုထဲမယ် ဆြာမင်းလူတယောက်ပဲ ကျန်တော့သပေါ့ …
စိတ်မကောင်းပါဘိတောင်း ..သူရို့ ညီအစ်ကိုတွေလည်း
တယောက်က အဆုတ် တယောက်ကအသဲ .. အရက်မသောက်တဲ့ ဒီဆြာကို
သက်ဆိုးရှည်မယ် ထင်ထားတာ ..ဘယ့်နှယ့် လျှာကင်ဆာ တဲ့ဗျာ..
တယောက်ပြီး တယောက်ဆုံးနေတာ နမြောထှာ
လုပေါင်တစ်ပါတီ အမေဂျီးကားဒေသ ဋ္ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ရဲဘော်ကြောင်ကြီး ဘရွတ်ကလင်းအရပ်သို့ ခြေလှမ်းမှားမိသည်တွင် ကပ္ပလီတစ်အုပ်မှ ဆုံးမလိုက်ရာ ကြောက်အားပိုပြီး မကြီးစန်းရင်ခွင်အတွင်းသို့ ခိုလှုံတော့မည်ဟု သက်တင်းထွက်လာခြင်း…
ဲပြီစိုးအောင်ကလဲ ရှိနေသေးဒေါ့ ဒီကြောင် ကို မျက်နှာသာပေးပါ့မလား…
ကျောက်ကြောင်ညီနောင် ၂ ပါး အချစ်စမ်းနေကြပြန်ပြီ ….
သက်တင်းစင် show ကြိုက်တယ်ဗျိုး အစုံသိရလို့ ….
တို့ ဘကြီး သိန်း ကတော့ လွတ်ရာပြေး ဖို့ စီစဉ်နေတာ သူ့သမိုင်း ကတော့ လှသွားမှာပါ။
ဦးစန်းအောင် ဆီ ရောက်ရှိနေသော
၈၈ပြည်ပြေး ဒုက္ခသည် ကြောင်ကြီးသည်
မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လာချင်သည် ဟု ဇွတ်ပူစာလွန်းသဖြင့်
အောက်လမ်းနည်း ဖြင့် ပြန်လာရန်
ဆာဒူးကြီးကပေ မှ အစီအရင်များ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည် ဟု သိရှိရပါသည်။
အနုပညာရှင်များ အတွင်းသတင်း ပေးပို့နေသူ အောက်ခံအဝတ်အစားဆိုင်ပိုင်ရှင် နှူးဘာဂီ
နောက်ကျ..ဂဲ့သူ စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးမှူး ဖားပြုတ်အောင်ပု အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း သ၀ဏ်လွှာပါးပါတယ်။
ဆိတ်အကောင်း..ဗူး သတင်းကို ဖတ်ရလို့ ဗူးသုတ အဲ- ဗဟုသုတ ရရှိသွားပါတယ်။
အာနာရရှိရေးအတွက် သွားဆရာဝန်မရှိလေ ကောင်းလေ ဟူသောအဆိုကို သွားဆရာဝန်များမှ
ဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောကြားပြီး မြှောက်ထိုးပင့်ကော်ရေးသားသူ တိုင်းဗုံးမဂ္ဂဇင်းမှ အောင်ကြူးကြူးအား ဇာဂနာ၊ ပလာရာများစွဲကိုင်၍ လိုက်လံရှာဖွေလျှက်ရှိကြောင်းးးးး